Xi Jinping wuxuu ahaa sarkaal Shiinaha oo hadda u shaqeeya Xoghayaha Guud ee Xisbiga Shuuciga ee China (CPC),  Madaxweynaha Jamhuuriyadda Shiinaha,  iyo Guddoomiyaha Komishanka Xarunta Dhexe.  Inta badan waxaa lagu sharraxay sida "hogaamiyaha ugu sarreeya ee Shiinaha", sannadka 2016-ka ayaa CPC si rasmi ah u siiyay magaca "hoggaamiyaha muhiimka ah".  Xoghaye Guud, Xi wuxuu heystey kursi hore oo ka tirsan Guddiga Joogtada ah ee Guddiga Sare ee Komishanka Xisbiga Shiinaha ee Shiinaha, oo ah hay'adda go'aaminta sare ee Shiinaha.
Xi waa xog-hayaha guud ee ugu horreeyay ee ku dhashay adduunka kadib dagaalkii labaad ee aduunka. Wiil uu ahaa hogaamiyaha Shiinaha Xi Zhongxun, ayaa loo kaxeeyay xerada Yanchuan County maaddaama uu da 'yar yahay ka dib markii uu aabaheed qalalaasihii dhaqameedkii ku jiray, wuxuuna ku noolaa god ku yaal tuulada Liangjiahe, halkaas oo uu u qabanqaabiyay shaqaale wada shaqaynaya  Ka dib markii uu ka soo qaatay Jaamacadda Tsinghua oo ah "Student Worker-Peasant-Asker Soldier Student",  Xi ayaa ka dhex muuqday siyaasad ahaan gobollada xeebaha ee Shiinaha. Xi wuxuu ahaa guddoomiyihii gobolka Fujian laga soo bilaabo 1999 ilaa 2002, iyo guddoomiye, ka dibna xoghayaha xisbiga ee gobolka Zhejiang ee sannadkii 2002 ilaa 2007. Ka dib markii shaqada laga eryay Chen Liangyu, Xi ayaa loo wareejiyey Shanghai oo ahayd xoghaye xisaabeed muddo gaaban sanadkii 2007. Guddiga Joogtada ah ee Guddiga Joogtada ah iyo xoghaynta dhexe ee Oktoobar 2007, kharashka shanta sanno ee soo socda sida Hu Jintao loo badalay. Xi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii 2008 ilaa 2013 iyo Guddoomiye-ku-xigeenka Guddiga Dhexe ee Milliteriga laga soo bilaabo 2010 ilaa 2012.
Tan iyo markii awoodda la wareegtay, Xi ayaa soo bandhigtay tallaabooyin kala duwan oo lagu hirgelinayo anshaxa xisbiyada iyo xaqiijinta midnimada gudaha. Saxiixiisa ololaha ladagaallanka musuqmaasuqa ayaa sababay hoos u dhac ku yimid mas'uuliyiin xisbiya oo madax-bannaan oo hawl-gab ah, oo ay ku jiraan xubno ka tirsan Guddiga Joogtada ah ee Guddiga Joogtada ah  Waxa lagu tilmaamaa inuu yahay muwaadin Chinese ah,  Xi ayaa adkeeyay xannibaadyada ku saabsan bulshada rayidka ah iyo fikradaha caqiidada, oo ku doodaya faafreebka internetka ee China sida fikradda ah "madax banaanida internetka".  Xi ayaa ku baaqay in dib loo habeeyo dhaqaalaha bulshada ee suuqa, si loogu hoggaansamo sharciyada iyo xoojinta hay'adaha sharciga ah, iyada oo xoogga la saarayo shakhsiyaadka iyo himilooyinka qaranka ee hoos imaanaya "Riyada Shiineeska". Xi ayaa sidoo kale kiciyay siyaasad dibad-bax badan oo khaas ah, gaar ahaan xiriirka Shiinaha-Japan, sheegashada Shiinaha ee Badda Shiinaha, iyo doorka uu ka yahay u doodaha ganacsiga xorta ah iyo caalamka. Waxa kale oo uu isku dayay in uu ballaadhiyo saameynta dhaqaalaha Shiinaha ee ku wajahan Mideynta Wadooyinka Hal Xulashada. Kulanka 2015 ee u dhaxeeya Xi iyo Madaxweynaha Taiwan Ma Ying-jeou ayaa markii ugu horeysay calaamadeeyay hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee labaduba ka dhoofay Taiwan tan iyo dhamaadkii Dagaalkii Sokeeye ee 1950-kii. 
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xi_jinping&oldid=209803"
Last edited on 23 Febraayo 2021, at 07:16
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 23 Febraayo 2021, marka ee eheed 07:16.